Ngaphakathi kwamasango udonga lwesixeko senkulungwane ye-12 - I-Airbnb
Ngaphakathi kwamasango udonga lwesixeko senkulungwane ye-12
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguRaffaella
Le ndlu ihlaziywe ngokupheleleyo iqaqambile, icoceke kakhulu, inefanitshala entle kakhulu, yangoku, ihonjiswe kakuhle, kwaye ikhululekile. Isakhiwo sihlelwa njengomfuziselo wolwakhiwo lwale mihla
Ifakwe entliziyweni yeBologna ngaphakathi kwamasango odonga lwedolophu yenkulungwane ye-12, amanyathelo kuphela ukusuka e-Piazza Maggiore, i-Basilica yaseSan Petronio, i-Due Torri, iivenkile zokutyela, imivalo kunye nesikhululo sebhasi. Le ndlu ihlaziywe ngokupheleleyo iqaqambile, icoceke kakhulu, inefanitshala entle kakhulu, yangoku, ihonjiswe kakuhle, kwaye ikhululekile. Isakhiwo sihlelwa njengomfuziselo wolwakhiwo lwale mihla.
Indlu ibekwe kumgangatho wesithathu (ipropathi ine-lifti) kwaye ihlalisa ukuya kwiindwendwe ezintathu.
Uya kuba ne: ikhitshi yesicwangciso esivulekileyo / indawo yokuhlala / yokutyela, igumbi lokulala elikhulu elinedesika, kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye ibonelelwa ngezithako zokupheka ezisisiseko ezifana netyuwa, ioyile, iziqholo, njl.
Le ndlu ibekwe kwindawo yothintelo lwendlela (“indawo ye-ZTL”) ngoko akukho zimoto zivumelekileyo ngaphandle kwemvume (oku kunyanzeliswa ziikhamera zeCCTV).
NgeMigqibelo, ngeeCawe nangeeholide zebhanki indawo ka-“T” (eyilwe sisitalato i-Rizzoli, i-Indipendenza kunye ne-Ugo Bassi) ivaliwe kwizithuthi kwaye ivuleleke kuphela kubahambi ngeenyawo nabakhweli beebhayisikile ukusuka ngentsimbi yesi-8 ukuya kweye-10 ebusuku.
Ndiza kufumaneka ngefowuni/umyalezo kulo lonke uhambo lwakho kwaye ngesiqhelo ndiya kubuyela kuwe kungekudala.
Mna okanye umyeni wam siza kukujonga.
Ukungena kusemva ko-6:00 p.m. (ngeentsuku zeveki) kwaye ixesha lokuphuma lingesivumelwano. Xa ubhukisha indawo yokuhlala, nceda usixelele ukuba ufuna ukungena kwangoko (ngeentsuku zeveki) kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukuhlalisa.
Nceda ube nesazisi/iPasipoti yakho ukuze uzazise. Ikhontrakthi yomqeshi iya kuba ilungele ukusayina (oku kuchazwe nguMthetho wase-Italiya).
Ukungena kusemva ko-6…